Darpan Nepal – साउन महिनाका चारवटा सोमबारको यस्तो छ छुट्टाछुट्टै महत्व , १९ वर्ष पछि शुभ संयोग बन्दै ! दिदिबहिनी हरुले अवस्य हेर्नुहोला ! पूरा पढ्नु होस ।।
साउन महिनाका चारवटा सोमबारको यस्तो छ छुट्टाछुट्टै महत्व , १९ वर्ष पछि शुभ संयोग बन्दै ! दिदिबहिनी हरुले अवस्य हेर्नुहोला ! पूरा पढ्नु होस ।।
Jul 21, 2018adminSocial0Like
साउन महिनामा १९ वर्ष पछि शुभ संयोग बन्दै ! चारवटा सोमबारको महत्व यस्तो छ !साउन महिना, भगवान शिवलाई प्रिय मान्ने गरिन्छ । त्यसैले श्रावण महिनाको चार वटा सोमबारको महत्व अझ बढी रहेको छ । हिन्दु धर्म अनुसार भगवान शिवलाई वर्षभर पुजिने भएपनि साउनका यी ४ वटा सोमबार अझ महत्तोका साथ भगवान शिब को पूजा आरधना गर्ने परम्परा चलीआएको छ।
सन् २०१८ अर्थात् यसपाली आउंदै गरेको साउन महिनाका सोमबार झन् धेरै शुभ संयोग लियर आउने रहेको ज्योतिषहरुले बताएका छन् । यसपाली
साउन महिना जुलाई २८, २०१८ (शनिबार) देखि सुरु हुँदैछ। जुन २६ अगस्ट, श्रावण पूर्णिमा को दिन बाट समाप्त हुनेछ। यस वर्ष साउन महिनामा १९ साल पछिको शुभ संयोग रहेको बताइएको छ ।
पहिलो सोमबार (जुलाई ३०): सफलता प्राप्ति र कष्ट निवारण
साउन महिनाको पहिलो सोमबारको वर्तले जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउने र सोचेभन्दा बढी प्रगति हुनेगर्छ । साथै जीवनमा आइपर्ने बाधा सँग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ । यदि तपाईं लामो समयको लागि कुनै नयाँ कार्य सुरु गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तर सफलता मिल्ने हो -होइन भन्ने चिन्ता गर्नुहुन्छ भने तपाई यो दिन वर्त बसेर आफ्नो कार्य सुरुवात गर्नुभएमा तपाईलाई अवस्य सफलता मिल्ने छ र तपाईको दीर्घकालीन योजनाहरू सफल हुदै जानेछन्। व्यवसाय सुरु गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि वर्त बसेर भगवान शिवको आरधना गरि यसदिन बाट सुरुवात गरेमा सच्चिनै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।
दोस्रो सोमबार (६ अगष्ट ): रोग निवारण
यो सोमबारको संयोग अनुसार राम्रो स्वास्थ्य,वृद्धि र बल प्राप्त हुने योग रहेको छ । यस दिन, लामो समय देखि गम्भीर रोगबाट पिडित व्यक्तिहरुले भगवान शिव को पूजा आराधना गरेर शिवलिङ्गमा जल चडाएपछि त्यो जल हातमा लिएर थोरै खाने र आफ्नो शरिरमा अबिषेक गर्दा रोग कम हुदै जाने मान्यता रहेको छ । यस दिन वर्त बसेर नियामले भगवान शिव को पुजापाठ गर्दा भएका रोगहरुले डदै जाने र अन्य कुनै रोगहरु सम्म टाढा जनेछन् ।
तेस्रो सोमबार (१३ अगष्ट ): मन्त्र सिद्धि वा मनकामना पूर्ण हुने
साउनको तेस्रो सोमबार वर्त बसी पुजापाठ गरेमा आफूले चिताएका कुराहरु पुरा हुदैँ जानेछन् । यस दिनमा वर्त बसेर भगवान शिवका मन्त्रहरु पाठ गरि पूजा गर्नु पर्नेछ । शिव भक्तहरुको लागि यो पनि धेरै विशेष हुनेछ जो शिव को मन्त्र सिद्ध गर्न चाहन्छन। तपाईसँग भएका समस्याहरु र तपाईहरुले सोचेका र अटेका कामहरु वर्त बसेर पूजा गर्ने क्रममा आफूले मनमनै सम्झिनु भयो भने यी कुराहरु छिटै तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नु को साथै समस्या हरु बिस्तारै हल हुदैँ जनेछन् ।
चौथो सोमबार (२० अगष्ट) : शत्रु परास्त तथा आर्थिक सम्पन्नता
साउन महिनाको अन्तिम सोमबार वर्त बसेर पुजापाठ गर्दा दुश्मन र बाधा हरु टाढा हुँदै जानेछन् । तपाईंको अर्थिक समस्याहरु समेत बिस्तारै हल हुदैँ जनेछन् । यो अन्तिम सोमबार , जो वर्त बसेर भगवान शिवको पूजापाठ गर्छ ,उ सँग शिवजी खुशी भै जीवनभरी उसको जीवनभरि उसको साथमा रहेर उसले खुशी र सुखी बनाई उसका सबै दुख र समस्याहरु बाट पार लगाउने काम गर्नुहुनेछ । त्यस्ता व्यक्तिको जीवनमा ठुलो उन्नति र प्रगति हुनेछ । साथै उसले सोचेका तथा अटेका कामहरु सबै पुरा हुदैँ जनेछन् जसले गर्दा भबिष्य उज्जोल बनाउन मद्धत हुनेछ ।Pokhara online
Previous Postयस कारण साउन महिनामा मासु र रक्सी खानु त के हात पनि लगाउनु हुदैन ! धार्मिक र वैज्ञानिक कारण सहित Next Postतरकारीवाला बालकको फोटो बन्यो भाइरल, यी बालकको खोजीमा लागेको छ पुरै सरकार::पूरा पढ्नु होस ।